न्याय परिषद सदस्य सिफारिसमा ढिलाइ, राजनीतिक जोखना हेर्दै बार नेतृत्व - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
न्याय परिषद सदस्य सिफारिसमा ढिलाइ, राजनीतिक जोखना हेर्दै बार नेतृत्व
२०७७ कार्तिक १५, शनिबार ०५:२४:००
नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्याय परिषद सदस्य नियुक्त भएका रामप्रसाद सिटौलाले अवकाश पाएपछि अब त्यस ठाउँमा नयाँ सदस्यको खोजी भइरहेको छ । रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्तिको व्यवस्था भइसक्नुपर्नेमा रिक्त भएको महिना दिन नाघिसक्दा समेत बारले एकजना सदस्य दिन सकेको छैन ।बारले अहिलेसम्म सदस्य दिन किन सकेन ? यसको स्पष्ट जवाफ बार पदाधिकारीसँग छैन । किनभने, यसले उनीहरुको अयोग्यता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सिटौलाको पदावधि सकिँदै छ भन्ने कुरा आज होइन, नियुक्तिकै बेला अर्थात् आजभन्दा ४ वर्षअघि नै थाहा भएको कुरा थियो । त्यसैले पहिला नै योग्य व्यक्तिको खोजी गरिएको भए एक दिन पनि त्यो पद खाली नराखी पदपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसमा बार नेतृत्व चुकेको छ ।
योग्य व्यक्तिको खोजीकै निम्ति यति लामो समय लाग्यो भन्ने मान्ने हो भने पनि बार नेतृत्वको अयोग्यताबाहेक केही देखिँदै अर्को कोणबाट हेर्दा नेपालको कानुन व्यवसाय क्षेत्र नै न्याय परिषद सदस्य बन्ने योग्यता भएको व्यक्तिकै खडेरी रहेको मान्नुर्ने हुन्छ ।
बुझिएअनुसार, बारभित्रको शक्ति सन्तुलन नमिल्दा न्याय परिषद सदस्य सिफारिस हुन नसकेको हो ।
बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पूर्वमाओवादी खेमा अर्थात् प्रचण्डनिकट मानिन्छन् । महासचिव लीलामणि पौडेल कांग्रेसतर्फका छन् । र, बारमा कांग्रेस पक्षधर वकिलका उनी एक्ला प्रतिनिधि पनि हुन् । बाँकी सबैजसो पदाधिकारी एवं सदस्य पूर्वएमाले निकट छन् ।
नेकपाको नेतृत्वमा रहेको टकरावको असरले पनि बारले न्याय परिषद सदस्यको उम्मेदवार छान्न नसकेको देखिन्छ । बाहिर देखाउनलाई त बारले इच्छुक सदस्यहरुबाट आवेदन नै मागेको छ । जबकि, उच्च निष्ठा र स्वाभिमान भएको व्यक्ति यस्ता पदमा आवेदन हालेर आउँदैनन् भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । अझ आवेदनभित्रैबाट सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन ।
नेकपा नेतृत्वको टकराव नमिलेसम्म बारले निर्णय गर्न नसक्ने हो भने अझै पनि न्यायपरिषद लामो समय बारको प्रतिनिधिविहीन हुनेछ । अध्यक्ष एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ । पूर्वएमाले खेमाबाटै सदस्य सिफारिस गर्ने हो भने पनि त्यहाँ केपी ओली र माधव नेपाल खेमा छन् । राजनीतिमा जस्तै माधव नेपाल र प्रचण्ड खेमा एक ठाउँमा उभिने हो भनेचाहिँ अध्यक्ष श्रेष्ठले चाहेको व्यक्ति सिफारिस हुन सक्छन् । तर, बारमा ओली पक्षधरकै वर्चस्व रहेको बुझिन्छ ।
न्यायाधीशहरुमाथि निगरानी राख्ने न्याय परिषदजस्तो संस्थामा पनि राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा अंशबण्डा गर्न खोज्नु निकै अश्लील र अनैतिक कर्म हो । स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको योभन्दा ठूलो धोका र व्यभिचार अर्को हुन सक्दैन । राजनीतिक तहको असमझदारी एवं गतिरोधका कारण बारले निर्णय गर्न नसकेको हो भने बार पदाधिकारीले ‘हामीहरु विवकेहीन पात्र हौँ’ भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ ।
बार केवल कानुन व्यवसायीहरुको जमात मात्र होइन, एउटा उच्च बौद्धिक पेसागत संगठन पनि हो । न्यायालयको अभिन्न हिस्सा हो । संविधानमा स्थान पाएको एक मात्र पेसागत संगठन हो । बौद्धिक पेसाकर्मीहरुमध्ये पनि अगुवा संगठन यसलाई मान्न सकिन्छ । मानव अधिकार, विधिको शासन र लोकतन्त्रकै रक्षक संगठन समेत हो । यही संगठनको निर्णय र प्रस्तुतिको स्तरले पनि हाम्रो लोकतन्त्रको स्तर निर्धारण हुन्छ । समयमा निर्णय दिन नसक्ने, योग्यतम व्यक्ति पहिचान गर्न नसक्ने, विशुद्ध व्यावसायिक एवं पेसागत क्षेत्रको निर्णयका लागि पनि दलीय नेतृत्वको मुख ताक्नेहरु बारको अग्रभागमा बस्छन् भने यसले स्वस्थ राज्य प्रणालीको पैरवी र पहरेदारी गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सिफारिस हुने सदस्य बरु यसपालि दलनिरपेक्ष नियुक्त भएका छन् । वरिष्ठता, योग्यता, निष्ठा एवं उच्च व्यावसायिकतामा कहलिएका, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालाजस्तो व्यक्ति न्यायपरिषदले पाउनु न्यायपालिकाकै निम्ति सौभाग्य हो । अब उनको व्यक्तित्वको उचाइलाई समेत न्याय गर्न सक्ने व्यक्तित्व बारले पठाउन सक्नुपर्नेछ । दलीय निकटता वा बार पदाधिकारीको स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति भएका आधारमा मात्र उक्त पदमा सिफारिस गर्ने हो भने त्यो न्यायालयप्रतिको अर्को धोका हुनेछ ।
जुम्लाका किसान ओखर खेतिमा आकर्षण हुदै
भारतीय विदेश सचिवलाई सीमा विवाद भन्दा नेकपा विवादकै बढ्ता चा...
मुलुकलाई अस्थिरतामा नधेकल्न नागरिक अगवाहरूको आग्रह, ठूलो मूल...
चीनको शरणमा प्रचण्ड ?